Ku saabsan Wasabi-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Hoyga>FAQ>Ku saabsan Wasabi
Muxuu Muxuu 100% Wasabi Powder Suuqa Ugu Yahay Siciif?
Waxa jira laba shuruudood: Marka hore, alaab-qeybiyeyaashu waxay ku daraan istaarijka galleyda; Marka labaad, waxaa lagu qooyaa jilif leh wasabi.
Maxaa wasabi laga sameeyaa?
Wasabi run ah waxaa laga sameeyaa rhizome (sida jirida dhirta oo ku baxda dhulka hoostiisa halkaasoo aad ka filan karto inaad aragto xidid) geedka Wasabia japonica. Saxeexdeeda nadiifinta nadiifka ahi waxay ka timaaddaa allyl isothiocyanate halkii laga isticmaali lahaa basbaaska 'capsaicin'.
Xagee ayuu ka yimaadaa wasabi?
Wasabi dhab ah wuxuu ka yimaadaa xoqidda asalka xididka la midka ah (oo loo yaqaan 'rhizome') oo ah geed muddo dheer ku dhashay waddanka Japan, Wasabia japonica. Waxay umuuqataa wax badan sida xididka malayga oo midabkiisu cagaaran yahay, labaduba waxay wadaagaan astaamaha dhadhanka isku midka ah, sidoo kale. Taasi waa sababta oo ah wasabi waa xubin ka mid ah isla qoyska Brassica sida malayga iyo mustard - sababta ugu weyn ee u adeegsanaysa budada malayga beddelkeeda inay si fiican u shaqeyso.
Wasabi ma ku adag tahay inuu koriyo?
Xaqiiqdii, BBC mar waxay ugu yeertay "geedka ugu adag ee soo baxa," qaladaad la sameeyona waxay noqon kartaa mid aad qaali ugu ah beeraleyda wasabi. Abuurka laftiisu waa ku dhowaad midkiiba hal doollar, badanaana ma soo baxaan. Warshadani waa mid aad uxullan oo kusaabsan deegaankeeda, hadii ay kuleedahay qoyaan badan, biyo aad uyar, ama nafaqooyinka khaldan, way engegi doontaa oo way dhiman doontaa.
Wasabi ma udgoonyahay?
Hadaad waligaa wasabi dhab ah yeelatay, waad ogtahay inay shiidan tahay, laakiin taasi maahan mid kulul. Waxay leedahay inbadan oo dhirta u eg, dhadhan / ur udgoon oo udgoon oo Farshaxanka Cunitaanku ku sifeeyo inay leeyihiin "ur cusub, cagaar, macaan, dufan leh, udgoon, iyo kuwa dhadhan fiican leh".
Caleemaha geedka wasabi sidoo kale waa la cuni karaa mise?
In kasta oo wasabi rhizome ay ku jirto dhadhanka ugu badan, dhirta oo dhan waa la cuni karaa. Warshadda lafteedu waa qurux badan tahay, oo dhererkeedu yahay ilaa laba cagood oo leh laamo dhaadheer oo jeexan oo dhulka korkiisa ka tooganaya. Caleemaha wadnaha-qaabeeya ayaa weynaada sida saxanka yar ee cashada waana wax lagu daro saladhyada ama suxuunta shiilida ee Japan.